औठाछाप ZigBee लक_ttlock स्मार्ट लक्स_फ्रन्ट डोर ह्यान्डलेसेट_मोर्टिस ताल्चा ह्वाइकल प्राइस_फाइजरप्रिन्ट बिक्रीमा ढोका लक
Zhongshan जुन्ली धातु उत्पादन को।, ltd, निर्माणमा लामो अनुभव कारखानाको रूपमा \_ स्मार्ट लक मेकिंग \_ डाइ कास्टि \_ ट्याम्पिंग। .. जो सधैं ग्राहकको परिवर्तन र विगत २० बर्ष भन्दा बढीमा ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्न इच्छुक छन्। जुन्लीले उत्पादन लाइनहरू मात्र रिम लक / मर्टाइज ढोका लकहरू \_ चतुर ढोका लकहरू मात्र बनाइरहेको छ। तर कास्टिंग उत्पादनहरूमा पनि लगानी कास्टिंग कास्टिंग \_ डाइ कास्टिंग \_ मोल्डिंग प्रोसेसिंग \_ ट्याम्पिंग र सीएनसी मेसिनिंग। समाप्त उत्पादन लाइनहरूको बारेमा, हामी डिजाइन गर्न \_ उत्पादन \_ वावेयरहाउजिंग र गुणस्तर निरीक्षण पनि। स्मार्ट ढोका लकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, जुन फिंगरप्रिन्टहरू \_ पासवर्डहरू \_ आईड कार्डहरू \_ भिजुअल क्यामेराको साथ खोल्न सक्छ .., ब्लूटुथ \_ wifi र यस्तै प्रकार्यहरू प्रदान गर्नुहोस्। हामी सरल ढोका लक सुरक्षा प्रणाली प्रदान गरेर स्मार्ट जीवन विकास गर्न प्रतिबद्ध छौं जुन घरको लागि \_ हुटेल \_ एयर प्रयोग गरेर सूजर bnb र प्यार्टमेन्ट र यस्तै यसका साथै, हामी दुबै OEM र ODM मा अनुभव छौं। कास्टिंग उत्पादनहरू बनाउने बारेमा, सामग्री एल्युमिनियम कास्टिंग \_ जिंक कास्टिंग र यस्तै भिन्न हुन्छ। हामीसँग काम गर्ने लाइनलाई समर्थन गर्न एक व्यावसायिक र अत्यधिक कुशल टोली छ र सबै हामी तपाईको विचार र नमूनाहरूको अनुसार बनाउन सक्छौं जुन OEM र ODM मा राम्रो छ। यसबाहेक, हामीसँग एक स्वतन्त्र QC टोली छ आगमन सामग्री \_ कार्य-इन-प्रगति \_ समाप्त उत्पादनहरू \_ ran rand गोदाम। सबैमा, हामी एक अत्यधिक ग्राहकको सन्तुष्टि खोजिरहेका छौं। र जुनली तपाईंको लागि आउन र सहयोगको नयाँ इतिहास बनाउन धेरै खुशी छ।
R5 डबल औठाछाप
कुञ्जीप्याड ढोका ताल्चा R5
स्मार्ट ढोका लक M360
अगाडि ढोका ह्यान्डलेसेट Y208
मोर्चेट लक M1
मुख्य ढोका लक E207
WiFi स्मार्ट ढोका लक F1
सुरक्षा ढोका लक E201A
गेट लकको विफलता र समाधान निर्माता चिन
गेट लक निर्माता चीन एक उपकरण हो जुन अरूलाई ढोका खोल्नबाट रोक्नको लागि ढोका लक गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन नामले सुझाव दिन्छ। त्यहाँ गेट लक निर्माता चीनको धेरै वर्गीकरणहरू छन्, र गेट लकहरूका लागि आवश्यकताहरू निर्माताहरू चीन विभिन्न अवसरहरूमा फरक छन्। सामान्य परिवारहरूले सामान्यतया चोरी विरोधी गेट लकहरू निर्माता चीन प्रयोग गर्छन्, जुन सुरक्षामा उच्च र तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ।
कम मूल्य मोर्ट लक निर्माताहरूको सम्बन्धित ज्ञानको संक्षिप्त परिचय
पहिले लक कोर स्क्रू गर्न कुञ्जी घुसाउनुहोस् र U- आकारको हुकबाट लक शरीर हटाउन।
एन्टी चोरी ढोका लक खोल्न नभएको धेरै सम्भावना र समाधानहरू
किनभने ढोका भित्र सुरक्षा बोल्ट बटन ढिलो छ, ढोका बन्द गर्दा धेरै शक्ति प्रयोग गरिन्छ, र सुरक्षा बोल्ट हल्लाइएको छ। लक सिलिन्डर मौलिक कुञ्जीसँग मोड्न सकिन्छ, तर ढोका खोल्न सकिँदैन
2021-05-27 थप हेर्नुहोस्
चीन निर्माताबाट फ्रन्ट ढोका ह्यान्डलसेटले ढोका ह्यान्डलहरूको प्रासंगिक ज्ञान परिचय गर्छ
ढोका ह्यान्डल एक अनिवार्य र अनिवार्य ढोका सहायक हो। यससँग दुबै सजावटी र कार्यात्मक गुणहरू छन्। सामान्य परिस्थितिहरूमा, ढोका ह्यान्डलहरू छुट्टै खरीद गर्न आवश्यक पर्दैन, किनकि बजारमा ढोकाहरू ढोका ह्यान्डलले सुसज्जित हुनेछ, तर ढोका ह्यान्डलहरूको प्रयोग दर धेरै उच्च छ, र यो खस्नु र पेन्ट गर्न सजिलो छ।
2021-11-23 थप हेर्नुहोस्
ढोका लक दुर्घटना रूपमा लक गरिएको थियो, म के गर्नु पर्छ?
जीवनमा, यो अपरिहार्य छ कि केही दुर्घटनाहरूले ढोका लक हिंस्रक रूपमा बन्द हुनेछ, जस्तै हावाको अचानक घुसाई, आदि द्वारा बन्द गरिएको छ। यी हिंस्रक ढोका बन्दहरूले सी horn लक जिब्रोलाई सजिलै अनहोक र खराब हुन्छ, वा ढोका विकृत वा लक गरिएको छ। जिब्रो फिक्सिंग स्क्रू ढिलो र प्रसारित छ, आदि, जसले ढोका लकलाई ढोकाको फ्रेम जाम गर्न र खोल्न सकिदैन। यदि ढोका लक खोल्न सकिदैन भने म के गर्नुपर्दछ? सम्पादकले तपाईंलाई पहिले बुझ्नको लागि सम्झना गर्छ कि ढोका लक खोल्न असफल हुन्छ।
ह्यान्डल ढोका लक कसरी हटाउनुहोस्
ढोका लकको ह्यान्डल ढोका ह्यान्डल हो। निर्माण प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सरल छ र लागत कम छ। ह्यान्डल ढोका लक एक प्रकारको लक हो जुन विशेषज्ञहरूको आँखामा विच्छेद गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ। त्यसैले साधारण मानिसहरूलाई ढोका लक बिच्छेद गर्न गाह्रो छैन। तपाइँसँग स्क्रूड्राइभर छ, सही चरणहरू थप्नुहोस् । ह्यान्डल ढोका लक कसरी हटाउने?
फिंगरप्रिन्ट ZigBee लक परिचय: औंलाप्रिन्ट लकको मेकानिकल टेक्नोलोजी सम्बन्धित ज्ञान!
अगाडि र पछाडि प्यानलको उचित डिजाइन, जुन उपस्थिति हो, एक संकेत हो जुन समान उत्पादनहरू भन्दा उल्लेखनीय फरक छ। अधिक महत्त्वपूर्ण कुरा, आन्तरिक संरचना लेआउटले उत्पादको स्थिरता र प्रकार्य निर्धारण गर्दछ। यस प्रक्रियामा डिजाइन, मोल्ड निर्माण, र सतह उपचार जस्ता बहु लिंकहरू समावेश छन्। त्यसकारण, अधिक शैलीका साथ निर्माताहरू, तुलनात्मक रूपमा बोल्ने, बलियो विकास र डिजाइन क्षमता र राम्रो स्थिरता हुन्छ।
2021-08-31 थप हेर्नुहोस्
यदि ढोका लक सहजै खुल्दैन भने म के गर्नुपर्दछ? यसको कारण के हो?
ढोका लकहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ र प्रत्येक दिन देख्न सकिन्छ, तर त्यहाँ धेरै स्तरहरू छन्, विरोधी चोरी स्तर। निम्नलिखित चोरी विरोधी चोरी ढोका लकहरूको विरोधी टेक्निकल सूचकहरूको तुलना तालिका हो। यस तुलना तालिकाका अनुसार, हामी हाम्रो आफ्नै ढोका-स्तर लकहरूको सुरक्षा प्रदर्शन बुझ्न सक्छौं।